Census Bureau Message – for American | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Census Bureau Message – for American
Census Bureau Message – for American
Posted by kai on Dec 21, 2010 in News, Opinions & Discussion |2comments
သန်းခေါင်စာရင်းဆိုပေမဲ့..သန်းခေါင်မှာ ခြင်ထောင်လှန်ပြီး.. လူစာရင်းလိုက်ကောက်တာမဟုတ်ပါဘူး..။ ဒီလိုပဲ.. စာတွေအိမ်တိုင်းပို့ ပြီး ဖေါင်ဖြည့်ခိုင်းပြီး ကောက်တာပါ..။ဒီစာရင်းအပေါ်မူတည်ပြီး ဥပဒေတွေ၊ အမတ်တွေ .ဖယ်ဒရယ်ပိုက်ဆံခွဲဝေမှုတွေလုပ်ရတာမို့ ..အင်မတန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီစစ်တမ်းကို ၁၀နှစ် ၁ခါကောက်ပါတယ်..။
အမေရိကမှာ လူ 308,745,538သန်း တဲ့.။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ထက် ၉.၇ ရာနှုန်းတက်လာပါသတဲ့..။
မြန်မာတွေဘယ်လောက်ရှိသလည်း.. သိချင်ရင်.. နောက်၂လမှာတင်ပေးတာပေါ့..။
တချို့ က ..မြန်မာပြည်ကို မုန်းတာမို့ ..မြန်မာလို့ စာရင်းမဖြည့်..။
တချို့ က..မြန်မာကိုမုန်းတာမို့ .. တိုင်းရင်းသားအနွယ်ကိုသာဖြည့်..။
တချို့ က .. မြန်မာပြည်မှာမွေး..မြန်မာလူမျိုးလို့..မြန်မာတွေက အသိအမှတ်မပြုခဲ့တာမို့ .. မြန်မာလို့မဖြည့်..။
The Census Bureau announced the first census numbers today – national population, state population and apportionment numbers.
slides, tables and maps from the Census Bureau’s press conference available at the link above.
2010 Total Resident Population: 308,745,538
% growth from 2000 population count: 9.7%
State with Largest rate of population growth: Nevada : +35.1%
8 states Gained Seats:
10 states Lost Seats:
32 states no change
TX gained the most seats with4seats. TX has gained seats for the past7decades.
Average size of each house district = 710,767 persons, up from 646,952 in 2000
5 most populous states: CA, TX, NY, FL, IL
5 least populous states: WY, VT, ND, ALASKA, SD
5 States with the fastest growth rate: NV, AZ, UT, ID, TX
5 States with slowest growth rate: MICHIGAN, RI, LOUISIANA, OH, NY
5 states with highest population density: NJ, RI, MA, CT, MD
5 states with the lowest population density: ALASKA, WY, MT, ND, SD
ASIAN AMERICAN JUSTICECENTER
1140 Connecticut Avenue N.W., Suite 1200
T 202.296.2300 x114
You are receiving this email because you are in the Asian American Justice Center’s Community Partners (CP) Network! Asamember of our CP Network you get first priority for: access to national and regional training activities; the opportunity to work closely on projects with AAJC (including funding opportunities, campaigns, etc.); community mobilization materials including reports, fact sheets (including translation), and toolkits; & technical assistance and information on issues of concern
အီးမေးလ်ဖေါ်ဝပ်ပေးတဲ့ … Burmese Complete Count Committee (BCCC) & NetMAA ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
အမေရိကားမှာ သန်းကောင်စာရင်းကောက်တာ ညင်သာလွန်းသဗျို့။ လက်ရှိနည်းက သူတို့အဆင့်အတန်းနဲ့ တော်ပေမဲ့ ရေရှည်အတည်တကျ နေထိုင်လေ့မရှိသူများတဲ့ နယူးယောက်မှာ လိုက်စာရင်းကောက်ဖို့ မလွယ်ဘူးဗျို့။ သတင်းထဲမှာဖတ်မိတာ House နယူးယောက်ပြည်နယ်က မှာကိုယ်စားလှယ် နှစ်နေရာတောင်လျော့သွားတယ်။ တက်ဆပ်ပြည်နယ်က နှစ်နေရာတိုးတယ်တဲ့။ စုစုပေါင်းမှ ရီပတ်ပလင်ကန်ပါတီ အားသာတဲ့ပြည်နယ်တွေက နေရာတိုးရသွားတယ် ဆိုလားပဲ။ အိုဘားမား ကြိုတားမထားလို့ ၂၀၁၂ကျရင် ဟိုနားသွားရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့။
Census 2010 ၇ဲ့စာ၇င်းအပြည့်အစုံက မတ်လ ၂၀၁၁ အထိတော့စောင့်၇ပါလိမ့်အုံးမယ်။ မြန်မာလူမျိုး ခေါင်းကောက်စာ၇င်းက တသိန်းခွဲကနေ နှစ်သိန်းကြားအသာလေးမို့…၇င်ခုံခုံနဲ့ စောင့်နေကြဆဲပါ…။
ခုချိန်လုပ်သင့်တာကတော့…ပေါ်ထွက်လာမဲ့မြန်မာလူဦးေ၇အပေါ်မှာအခြေခံပြီး..ဆက်လုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေ (မြန်မာ community အတွက်) fact finding committee တခုဖွဲ့ဘို့လိုပါလိမ့်မယ်။
(၁) federal/state အစိုး၇၇ဲ့ အဓိကform ပုံစံတွေကိုမြန်မာဘာသာနဲ့ပြန်ဆိုပြီး တ၇ားဝင်ပုံစံအဖြစ် တီထွင်သတ်မှတ်ဖို့။
(၂) ဘာသာပြန် translator များတ၇ားဝင်သတ်မှတ်ပေးပြီး ဌာနတွေမှာအသိပေးကြေငြာချက်ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ထားဘို့။
(၃) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် စတဲ့ စာမေးပွဲများမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ဖြေဆိုခွင့်ပြုဘို့။
(၄) USCIS အပါအ၀င် ဌာနများ၇ဲ့ လူအများသိသင့်တဲ့ information booklets/leaflets/fliers တွေကိုမြန်ဘာဘာသာနဲ့တ၇ားဝင်ကျယ်ကျယ် ထုတ်ဝေဘို့။
မောင်မိုးညိုကတော့လက်လှမ်းမှီ၇ာschool district တွေမှာ၇ှိတဲ့ပြောင်းခိုသူကလေးတွေ သက်ဆိုင်၇ာဌာနတွေအကူနဲ့ ခုကတည်းကမြန်မာဘာသာနဲ့ ပုံစံအချို့စ စမ်းသုံးနေပါပြီ။
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကော်မီတီမျိုးကတော့ အိမ်မှာထိုင်ပြီးလုပ်၇မဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်သလို ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးများသူတွေ (နံမယ်ကောင်းလိုချင်ကြသူ) အတွက်တော့ သိပ်အသုံးဝင်မှာမဟုတ်ကြောင်း၇ိုးသားစွာနဲ့အသိပေးပါ၇စေ။ နောက်တခုက သက်ဆိုင်၇ာ county/district/state/federal အဖွဲ့အစည်းများမှာ ပါဝင်ပါတ်သက်နေကြသူများကပါဝင်ဦးဆောင်ကြ၇င် အတော်ခ၇ီးေ၇ာက်မယ်ထင်ကြောင်း initiate လုပ်လိုက်၇ပါတယ်။